36 echiche banyere ndị edemede, edemede na akwụkwọ edemede | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ
Na Ofbọchị akwụkwọ. Nagịnị bụ akwụkwọ na-enweghị onye ode akwụkwọ? Gini bu akwukwo n’enweghi uche nke ndi dere ya? Echiche gị, echiche gị, nro gị na nrọ gị, olile anya gị, ihe mgbochi gị, mmezu gị na ọdịda gị. Akụkụ ọ bụla nke akwụkwọ edemede, echiche ọ bụla ma ọ bụ nkọwa ọ bụla gbasara ọrụ ahụ pụrụ iche na onye edemede ahụ.
Lee 36 n'ime ha anyị nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ na anyị agaghị, mana nke ahụ ga-eme ka anyị chee echiche. Ma ọ bụ ọ bụghị. Ka anyị hụ ha. Anọ m na nke Bill Adler, Alfredo Conde, Manuel del Arco, Jesús Fernández Santos, Julien Green na Adelaida García Morales
Ide ihe kachasị ọrụ n'ụwa - Bill adler.
Onye ọ bụla na-ede akwụkwọ na-akwụ ụgwọ onwe ya, dị ka o nwere ike, n'ihi ụfọdụ afọ ojuju ma ọ bụ ajọ chi - Arthur Adamov.
Akwụkwọ, site n'ụdị ya, ga-agbagha echiche nke ụnyaahụ na okwu taa -Robert Martin Adams.
Ide ihe m dị ka crocheting: M na-atụ egwu mgbe niile na m ga-atụ uche isi - Isabel Allende, nụkwa.
Otu peeji were m ogologo oge. Ibe abuo kwa ubochi di nma. Ibe akwukwo ato mara nma - Kingsley William Amis.
Enwere ọtụtụ ndị na-ede nke ọma ịghara ikwu ihe ọ bụla - Francis Ayala.
Ozugbo ị mụtara ụtọ asụsụ, ide ihe bụ nanị ịgwa akwụkwọ akụkọ ahụ ma n'otu oge ahụ ịmụ ihe ịghara ikwu - Beryl bainbridge.
Echere m na ị na-eche site n'ihe ị dere ma ọ bụghị nke ọzọ - Louis Aragon.
Ihe siri ike abụghị ide, ihe siri ike bụ ịgụ - Akwụkwọ ntuziaka nke Arch.
Agha na udo Ọ na-eme m ọrịa n'ihi na anaghị m ede ya n'onwe m, nke ka njọ, agaghị m enwe ike - Jeffrey H. Onye na-agba ụta.
Onye edemede ọ bụla na - emepụta ndị bu ya ụzọ - Jorge Luis Borges.
Akọwala onye edemede n'ụzọ ọ bụla site na asambodo, mana site na ihe ọ dere - Mikhail Afanósevich Bulgakov.
Dị ọgụgụ ọgụgụ dị iche na ọnụ ọgụgụ ndị na - agụ ya - John Benet.
Emechaa akwụkwọ dị ka ịkpọpụ nwata n’èzí ma gbaa ya - Isi okpu.
Akwụkwọ nwere ike ịdị ebighi ebi dịka nke a, mana ọ bụghị mmetụta mụrụ ya - Pierre Blanche.
Bebụ onye edemede bụ izuru ndụ n'ọnwụ - Alfredo Conde kwuru.
Ndi choro igbanwe ndu ndu site na nzuzu nke akwukwo - Camilo Jose Cela.
Ọ bụrụhaala na echiche dị, okwu na-adị ndụ yana akwụkwọ na-aghọ ụzọ mgbapụ, ọ bụghị site na, kama na ndụ - Cyril Connolly.
Onye edemede nke na-ede ihe nke ọma bụ onye na-ese akụkọ ihe mere eme - John DosPasos.
A na - ahụ ihe a na - adịghị ahụkebe na pere mpe pere mpe, belụsọ na okike ederede, nke a bụ nkenke akwụkwọ - Julio Cortazar.
N'etiti ebumnuche nke onye dere ya na ebumnuche nke onye na-agụ ya bụ ebumnuche ederede nke ederede nke na-agbagha nkọwa a na-apụghị ịgbagha agbagha - Umberto Echo.
E nwere ihe atọ mere ị ga - eji bụrụ onye edemede: n'ihi na ịchọrọ ego ahụ; n’ihi na inwere ihe ị ga-ekwu nke ụwa kwesiri ịmata; na n'ihi na ị maghị ihe ị ga-eme n'oge ehihie - Quentin kụrụ.
Akwụkwọ ga - adị oke egwu ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ndị na - adịghị anwụ anwụ na ya. Anyi aghaghi iwere ha otu ha di, ma ghara icho anya ka ha diri - Oliver Edwards.
Enwere ike iji onye edemede tụnyere onye akaebe maka ikpe ma ọ bụ ịgbachitere ya, ebe ọ bụ na, dị ka onye akaebe n'ụlọ ikpe, ọ na-ahụ ihe ụfọdụ na-agbanahụ ndị ọzọ - Ilya Ernenburg.
Ekwensu bu ihe di nkpa, n’ime akwukwo na ndu; ọ bụrụ na a chụpụ ndụ ọ ga-abụ ihe nwute, na-agbagharị n'etiti okporo abụọ ebighi ebi, na akwụkwọ ga-abụ abụ nke iru uju - Omar fakhury.
Onye edemede edeghị ezumike nka na ụlọ elu ọdụ, mana na ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe - Max frisch.
Inweta na ịjụ ihe atụ, iji ike nke onwe merie ha, nke a bụ ọrụ onye edemede nwere ọrụ - Constantin Fedine kwuru.
Mgbe ị na-ede, gosi ụwa n'ogo gị - Jesus Fernandez Santos.
Mgbe m dere, m bu n'obi inwetaghachi ụfọdụ ihe nwere ike ịgba ndị mmadụ ume ka ha dịrị ndụ ma nyere ndị ọzọ aka ka ha lee anya - Edward Galeano.
Anaghị m achọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na - agụ akwụkwọ, mana ụfọdụ ndị na - agụ ya - John Goytisolo.
Ihe dị ịrịba ama banyere Shakespeare bụ na ọ dị ezigbo mma, n'agbanyeghị na ndị niile na-ekwu na ọ dị ezigbo mma - Robert Graves.
Echiche ijiji na okwu n’aga ụkwụ. Lelee ihe nkiri nke onye edemede - Julien acha akwụkwọ ndụ.
Nanị ezigbo ihe onye edemede nwere ike ime iji ree akwụkwọ ya bụ ide ha nke ọma - Gabriel García Márquez.
Maka ihe ịga nke ọma onye edemede na-adịru nwa oge, ọ bụ ọdịda mgbe niile - Graham greene.
N'ime usoro iche echiche na ncheta dị mgbagwoju anya - Adelaida Garcia Morales.
Fọdụ ndị edemede ka amụrụ naanị ka ha nyere onye edemede ọzọ aka dee ahịrịokwu. Mana onye edemede enweghị ike ịkọ site na kpochapụwo nke bu ya ụzọ - Ernest Hemingway.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Echiche 36 gbasara ndị edemede, edemede na akwụkwọ
Akwụkwọ kacha mma maka njem